သတ္တုဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက် China Hydraulic Shearing Machine 6mm 2500mm | Plate Shearing Europe အမျိုးအစား - ACCURL ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူ accuratel
လျှပ်စစ် Servo စာနယ်ဇင်းဘရိတ်
Hybrid Servo Press ဘရိတ်
၁၀ Axis Press Brake
SmartLine 1Kw-6Kw Fiber Laser ဖြတ်စက်
MasterLine 6Kw-20Kw Fiber Laser ဖြတ်စက်
မီးလျှံ Plasma ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
Desktop Plasma ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
3 ဝင်ရိုးတန်း Waterjet ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
5 Axis Waterjet ဖြတ်တောက်စက်
ဆုံလည် Punch နှိပ်ပါ
လွှဲ Beam ညှပ်
ငါ့ကိုဖြတ်တောက်ရန်အတွက် Hydraulic Shearing Machine 6mm 2500mm ...
ACCURL CNC ထွန်ထိုးထိုးစက် MAX-T-50 တန်အတွက် ...
ACCURL ထုတ်လုပ်သူ 1000w IPG Fiber CNC Laser Cuttin ...
သတ္တုဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက် Hydraulic Shearing Machine 6mm 2500mm | Plate Shearing Europe အမျိုးအစား - ACCURL
ACCURL ® guillotine ညှပ်သည်စီမံကိန်း၏အသီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ Made in China တီထွင်ဖန်တီးမှု၊ ဒီဇိုင်းနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတို့သည်အကောင်းဆုံးသောတရုတ်နှင့်ဥရောပအစိတ်အပိုင်းများအားလုံး၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအားလုံးနှင့်အတူတကွစုစည်းနိုင်စေခြင်းဖြစ်သည်။ ရလဒ်မှာ avant-garde ၏အကောင်းဆုံးသောပေါင်းစပ်မှုနှင့် ထိရောက်သောနည်းပညာ၊ အလွန်အစိုင်အခဲစက်၏အာမခံချက်၊ ၎င်း၏ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်အလွန်အရည်အသွေးမြင့်ခြင်းတို့ဖြင့်တိကျသည်။
ယခုဆက်သွယ်ပါ PDF ကိုကူးပါ
ACCURL® guillotine ညှပ်များကိုစံအမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းကိရိယာများဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။ သို့သော်လိုအပ်သောလိုအပ်ချက်အရရွေးချယ်နိုင်သောပစ္စည်းများကိုအချိန်မရွေးထည့်နိုင်သည်။
1. အစိုင်အခဲ monolithic ဖွဲ့စည်းပုံ
၂။ Avant-garde ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်
၃။ Blade carrier beam - ဖြတ်တောက်ခြင်းဝင်ရိုးပေါ်ရှိတွန်းကန်စင်များနှင့်ဓါးသယ်ဆောင်သောရောင်ခြည်
၄။ Blade pressure cylinders သည်အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်သောဖိအားဖြင့်ဖြတ်တောက်သောအားကိုအခြေခံသည်
ဘောလုံးကို screw နှစ်ခုနှင့်အတူ 6. နောက်ဘက်ထိန်းညှိ
8. အမွှာ - ရှေ့ကနေဓါးသွား
9. LED illumination နှင့်အတူလိုင်းဖြတ်တောက်ခြင်း
10. Estun E21s ကိန်းဂဏန်းထိန်းချုပ်မှု
ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်သည့်ချိန်ညှိနိုင်သောလမ်းညွှန်များ၊ မီလီမီတာစည်းမျဉ်းများနှင့်လည်ပတ်သောဘီးများပါ ၀ င်သောရှေ့မျက်နှာပြင်အဖုံး
0,05 မီလီမီတာတိကျမှန်ကန်မှုနှင့်အတူ 12. HIWIN Ball ကို screw နှစ်ခု & ပွတ်လှံတံ။
ခိုင်ခံ့သော monolithic တည်ဆောက်ပုံသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောတည်ငြိမ်မှုနှင့်ဖြတ်ခြင်းကိုတိကျစေသည်။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်အော်ပရေတာကြား ၀ င်မှုများကိုအနိမ့်ဆုံးသို့လျှော့ချရန်အတွက်အကောင်းဆုံးသောလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီဒီဇိုင်းကိုပင်စုံလင်သည်။
ဤအလုပ်ရုံစက်ကိုအဆင့်မြင့်သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးကြမ်းတမ်းသောဆောက်လုပ်ရေးအပြင်စွမ်းဆောင်ရည်လည်းကောင်းမွန်သည်။ ၎င်းသည်သံမဏိဂဟေဆော်ခြင်းအားလုံးအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောအခြေခံအဆောက်အအုံပါသောစက်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းအစားထိုး Hydraulic Guillotine Shearing Machinery ကိုမိုဘိုင်း workbench၊ stroke digital display နှင့်အီလက်ထရောနစ်ကာကွယ်ရေးကိရိယာများတပ်ဆင်ခြင်းဖြင့်လွယ်ကူစေသည်။ အပြောင်းအလဲနဲ့လိုအပ်ချက်များ၏သဘောသဘာဝပေါ်မူတည်။ , အလုပ်လုပ်ဖိအားသတ်မှတ်ထားသောအကွာအဝေးအတွင်းချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။ ဟိုက်ဒရောလစ် guillotine type plate shearer သည်ဗဟိုတွင်ခလုတ်ထိန်းချုပ်မှုရှိပြီးလည်ပတ်ရန်လွယ်ကူသည်။ ဤအလုပ်ရုံစက်ကိုတိကျသောစာရွက်နှင့်ပန်းကန်အလုပ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုသည်။
Hydraulic Guillotine Shear Machinery သည်သုံးစွဲသူများကိုအောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများပေးသည်။
ရှေ့သို့ သံမဏိသတ္တု CNC ပန့်စာနယ်ဇင်းထုတ်လုပ်သူများအတွက် ACCURL စီဒီစီလည်ပတ်အမြင့်ဆုံး MAX-T-50 တန်
နောက်တစ်ခု: ACCURL 6Axis Electric Servo CNC Press Brake 40Ton 2000mm
Bowang ပစ္စည်းစက်မှုဥယျာဉ်၊ Bowang ခရိုင်၊ Maanshan, Anhui, တရုတ်